Axmed Fiqi “Dalka si kaloo wax looga bedeli karo ma leh, ilaa Villa Somalia wax laga bedelo” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
7th July 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Isagoo ka hadlayay xaflad shalay ka dhacday degmada Cadaado oo lagu sagootinayay, ayaa ka mahad celiyay taageeradii uu ka helay shacabka intii uu socday ololaha doorashada, waxaana uu u hambalyo u diray hogaanka Maamulka cusub ee Galmudug.
Axmed Fiqi ayaa sheegay inuu dib ugu laaban doono Gobollada Dhexe, isagoo xusay in howsha ay hada kow tahay, waxaana uu ugu baaqay dhalinyarada, haweenka iyo bulshada inay is abaabulaan.
“Howsha hada ayay kow tahay, waxaa u imaan doonaa howlo gaar noo ah, howlo dalka iyo dadka samata bixintooda ah 2016 wixii ka dambeeya ayaa Gobollada Dhexe ku soo laaban doonaa”ayuu yiri Amb. Axmed Fiqi
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay muhiim tahay inuu is bedel uu ka dhaco Villa Somalia oo uu ugala jeeday hogaanka dalka.
“Dalka si kaloo wax looga bedeli karo ma leh, illaa Villa Somalia wax laga bedelo”ayuu yiri Amb. Axmed Macalin Fiqi oo la sheego inuu saaxib dhow la yahay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif.
Siyaasiyiin iyo dad badan ayaa xusul duub ugu jira sanadka 2016, xilligaasoo uu waqtiga ugu ek yahay dowladda hada jirta, waxaana sanadka soo socda la rajeynayaa in dalka doorasho ka dhacdo.